Quarantine ဝငျပွီး ဆေးစဈခကျြအဖွထှေကျလာပွီဖွဈတဲ့ ဇျောဝငျးထှဋျ - ygn-news.com
အခုလို Covid-19 ရဲ့ ခွိမျးခွောကျမှုကို တဈကမ်ဘာလုံး ခံနရေတဲ့ အခြိနျကာလကွီးမှာ ကူးစကျရောဂါပွနျ့ပှားမှုနှုနျးလြော့ကစြရေေး ရောဂါကှငျးဆကျပွတျစရေေးအတှကျ အစိုးရရဲ့ လမျးညှနျခကျြတှအေပွငျ ပွညျသူတှရေဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုတှကေလညျး အဓိကကတြဲ့နရောမှာပါဝငျနပေါတယျ။ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှကေို ကူညီတဲ့အနနေဲ့ ရောဂါမရှိသူတှကေလညျး ကိုယျ့အိမျထဲမှာပဲကိုယျနနေကွေပွီဖွဈသလို ရောဂါရှိသူတှနေဲ့ အခြိနျခဏလေးပဲဖွဈဖွဈ နီးစပျမှုရှိခဲ့သူတှအေနနေဲ့လညျး ကိုယျ့အသိစိတျဓာတျနဲ့ ကိုယျ Q ဝငျနကွေတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ပွညျသူတှခေဈြတဲ့ ဦးညီထှဋျကတော့ မကွာသေးမီရကျပိုငျးကပဲ ကိုယျ့အသိစိတျဓာတျနဲ့ ကိုယျ quarantine ဝငျသှားခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
ဦးညီထှဋျ Q ဝငျပွီး ရကျအနညျးငယျအကွာမှာပဲ ဦးညီထှဋျရဲ့ အမဖွေဈသူ အဆိုတျောထားနဲ့ ပတျသကျပွီး ကောလဟလတှထှေကျလာခဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှအေတျောမြားမြား စိုးရိမျပူပနျခဲ့ကွပါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဦးညီထှဋျရဲ့ သမီးဖွဈသူ ဝငျးထှဋျတာရာက သတငျးတှဟော မဟုတျမမှနျကွောငျး ဖွရှေငျးပေးခဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှေ စိတျသကျသာရာရခဲ့ကွတယျဆိုရမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ဦးညီင်္ထှဋျရဲ့ ကနျြးမာရေးအတှကျတော့ ရတကျမအေးဖွဈနကွေရဆဲပါ။ ဦးညီထှဋျဟာ နထေိုငျမကောငျးခွငျးမရှိပဲ ကနျြးမာရေးဒေါငျဒေါငျမွညျအနအေထားနဲ့ Q ဝငျသှားခဲ့တာဖွဈကွောငျးလညျး သိရပါတယျ။
အခုတော့ စိုးရိမျပူပနျနတေဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ ရငျထဲက အလုံးကွီးကသြှားစမေယျ့ ဝမျးသာစရာသတငျးပျေါထှကျလာခဲ့ပါပွီ။ အဲဒါကတော့ မကွာသေးမီက ဦးညီထှဋျရဲ့သမီးဖွဈသူ ဝငျးထှဋျတာရာက သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျမှာ ဦးညီထှဋျရဲ့ ဆေးစဈခကျြအဖွထှေကျလာပွီဖွဈကွောငျးနဲ့ အဖွကေ Negative ဖွဈကွောငျး ပရိသတျတှကေို ဝမျးမွောကျစှာ အသိပေးလာခဲ့ပါတယျ။ ဝငျးထှဋျတာရာက သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျမှာ “မနေ့ မနကျက လာစဈပေးသှားတယျဆိုကတညျးက တဈအိမျလုံး ရငျခုနျနကွေတာ အထုတျပဲ ပွငျထားရမလိုလို…ထိုငျရမလို…ထရမလို…ရယျခငျြသလိုလို…အိမျသာပဲ ဝငျခငျြသလိုလိုနဲ့! နှဈနဲ့ခြီကွာသလို ခံစားရတဲ့ တဈရကျပဲ MOHS page ကို Refresh ရတာလဲ သမေလိုပဲ ခုမှပဲ သကျပွငျးခနြိုငျတော့တယျ။ Negative တဲ့စိတျပူပေးကွတဲ့…ဝိုငျးဆုတောငျးပေးကွတဲ့…ကူညီပေးကွတဲ့သူတှေ အားလုံးကို ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ”လို့ ပွောပွထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ပွောခငျြလှနျးလို့ပရိသတျကွီးလညျး ဦးညီထှဋျအတှကျ ဝမျးသာနကွေမယျထငျပါတယျ။ ဒီကပျကွီးပွီးရငျ ဦးညီထှဋျရဲ့ အနုပညာတှကေိုဆကျလကျအားပေးနိုငျဖို့အတှကျ လကျရှိမှာ အိမျထဲမှာပဲနပွေီး ရောဂါကာကှယျကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျနျော။
အခုလို Covid-19 ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကို တစ်ကမ္ဘာလုံး ခံနေရတဲ့ အချိန်ကာလကြီးမှာ ကူးစက်ရောဂါပြန့်ပွားမှုနှုန်းလျော့ကျစေရေး ရောဂါကွင်းဆက်ပြတ်စေရေးအတွက် အစိုးရရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေအပြင် ပြည်သူတွေရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကလည်း အဓိကကျတဲ့နေရာမှာပါဝင်နေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို ကူညီတဲ့အနေနဲ့ ရောဂါမရှိသူတွေကလည်း ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာပဲကိုယ်နေနေကြပြီဖြစ်သလို ရောဂါရှိသူတွေနဲ့ အချိန်ခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ် နီးစပ်မှုရှိခဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်အသိစ်ိတ်ဓာတ်နဲ့ ကိုယ် Q ဝင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ပြည်သူတွေချစ်တဲ့ ဦးညီထွဋ်ကတော့ မကြာသေးမီရက်ပိုင်းကပဲ ကိုယ့်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ ကိုယ် quarantine ဝင်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဦးညီထွဋ် Q ဝင်ပြီး ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲ ဦးညီထွဋ်ရဲ့ အမေဖြစ်သူ အဆိုတော်ထားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကောလဟလတွေထွက်လာခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေအတော်များများ စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးညီထွဋ်ရဲ့ သမီးဖြစ်သူ ဝင်းထွဋ်တာရာက သတင်းတွေဟာ မဟုတ်မမှန်ကြောင်း ဖြေရှင်းပေးခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေ စိတ်သက်သာရာရခဲ့ကြတယ်ဆိုရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဦးညီင်္ထွဋ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ ရတက်မအေးဖြစ်နေကြရဆဲပါ။ ဦးညီထွဋ်ဟာ နေထိုင်မကောင်းခြင်းမရှိပဲ ကျန်းမာရေးဒေါင်ဒေါင်မြည်အနေအထားနဲ့ Q ဝင်သွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
အခုတော့ စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ရင်ထဲက အလုံးကြီးကျသွားစေမယ့် ဝမ်းသာစရာသတင်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ အဲဒါကတော့ မကြာသေးမီက ဦးညီထွဋ်ရဲ့သမီးဖြစ်သူ ဝင်းထွဋ်တာရာက သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာ ဦးညီထွဋ်ရဲ့ ဆေးစစ်ချက်အဖြေထွက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အဖြေက Negative ဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို ဝမ်းမြောက်စွာ အသိပေးလာခဲ့ပါတယ်။ ဝင်းထွဋ်တာရာက သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာ “မနေ့ မနက်က လာစစ်ပေးသွားတယ်ဆိုကတည်းက တစ်အိမ်လုံး ရင်ခုန်နေကြတာ အထုတ်ပဲ ပြင်ထားရမလိုလို…ထိုင်ရမလို…ထရမလို…ရယ်ချင်သလိုလို…အိမ်သာပဲ ဝင်ချင်သလိုလိုနဲ့! နှစ်နဲ့ချီကြာသလို ခံစားရတဲ့ တစ်ရက်ပဲ MOHS page ကို Refresh ရတာလဲ သေမလိုပဲ ခုမှပဲ သက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်။ Negative တဲ့စိတ်ပူပေးကြတဲ့…ဝိုင်းဆုတောင်းပေးကြတဲ့…ကူညီပေးကြတဲ့သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်”လို့ ပြောပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပြောချင်လွန်းလို့ပရိသတ်ကြီးလည်း ဦးညီထွဋ်အတွက် ဝမ်းသာနေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီကပ်ကြီးပြီးရင် ဦးညီထွဋ်ရဲ့ အနုပညာတွေကိုဆက်လက်အားပေးနိုင်ဖို့အတွက် လက်ရှိမှာ အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီး ရောဂါကာကွယ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်နော်။
နိုငျငံနဲ့အဝှမျး Covid – 19 ရောဂါ ခံစားနရေသူတှအေတှကျ အမရေိကနျဒျေါလာ တဈသနျး လှူဒါနျးလိုကျတဲ့ ဦးဇျောဇျော